uBook၊ Audible အတွက်အပြင်းအထန်ပြိုင်ဘက် eReaders အားလုံး
uBook၊ Audible အတွက်အပြင်းအထန်ပြိုင်ဘက်
သင်တို့အများစုသည် Audiobook စျေးကွက်ကိုမြင့်တက်နေသည့်စျေးကွက်တွင်စိတ် ၀ င်စားသည်မှာသေချာသည်။ သင်တို့အများစုသည်တရားမ ၀ င် audiobooks သို့မဟုတ် Audible သို့ကူးပြောင်းခဲ့ကြသော်လည်းစပိန်စကားပြောသောအသုံးပြုသူများအတွက်အခြားတရားဝင်ရွေးချယ်စရာများလည်းကောင်းသည်။ ဤအဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမှာဟုခေါ်သည် uBook ပါ။အော်ဒီယိုစာအုပ်တစ်အုပ် လစဉ်ကြေးအတွက်အော်ဒီယိုစာအုပ်အမြောက်အမြားကိုထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်.
uBook ကုမ္ပဏီကိုဘရာဇီးတွင်မွေးဖွားခဲ့သည် လက်တင်အမေရိကစျေးကွက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက် ဒီတော့သူ့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းအများစုဟာပေါ်တူဂီနဲ့စပိန်ဘာသာတို့ဖြစ်တယ်။ ပေါ်တူဂီနှင့်စပိန်ဘာသာတို့ မှလွဲ၍ အခြားဘာသာစကားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အော်ဒီယိုစာအုပ်များပါ ၀ င်သည့်အော်ဒီယိုစာအုပ်ပုံစံခေါင်းစဉ်ပေါင်း ၂၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည့်ကက်တလောက်။
uBook streaming ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အတူစပိန်ဘာသာဖြင့် Audiobooks များများလာလိမ့်မည်
သို့သော်လည်းငါ uBook နှင့်ပတ်သက်သောအကောင်းဆုံးအရာသည်၎င်း၏ catalog မဟုတ်ဘဲ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ uBook သည် iOS နှင့် Android အတွက် app format ဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်ငါတို့မိုဘိုင်းနှင့်သုံးနိုင်သည်အထူးတက်ဘလက်သို့မဟုတ်အလားတူတစုံတခုကိုဝယ်ဖို့မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်သင့်အား app နှင့်တစ်ချိန်တည်းအခြားမည်သည့် mobile function ကိုမဆိုသုံးရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် အော်ဒီယိုစာအုပ်တွေကိုနားထောင်နိုင်ဖို့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမလိုအပ်ပါဘူး.
uBook သည် Audiobook ကိုရွေးချယ်သောစနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ထဲသို့အလိုအလျောက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမလိုဘဲခရီးသွားနေစဉ်သို့မဟုတ်လေယာဉ်ပျံစနစ်တွင်၎င်းကိုနားထောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ထို့အပြင် uBook သည် Audible ထက် ပို၍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောနှုန်းရှိသည်။ တစ်လလျှင်6ယူရို, Audible စျေးနှုန်းထက်နိမ့်သောစျေးနှုန်း။ သင်၏ဝန်ဆောင်မှုကို ၇ ရက်အခမဲ့ခံစားခွင့်ရှိသည်။
uBook ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ၎င်းသည်စပိန်စကားပြောစျေးကွက်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်ebooks သို့မဟုတ် audiobooks များကဲ့သို့သောအရာများကိုရောက်ရှိရန်စျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် uBook ပါ။ စပိန်စကားပြောအော်ဒီယိုစာအုပ်ပဲမဟုတ်ဘူး သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » Software များ » uBook၊ Audible အတွက်အပြင်းအထန်ပြိုင်ဘက်
Simon & Schuster က ebook ရောင်းအားမြင့်တက်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်